ဘဲန်ရဲ့ သီဆိုမှုကြောင့် ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့် - Cele Connections
ဘဲန်ရဲ့ သီဆိုမှုကြောင့် ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
admin | 02/11/2019 | Celebrity | No Comments
သက်မွန်မြင့်ကတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီး ပရိသတ်တွေတခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေ ရရှိနေတဲ့ ၀ါရင့်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကြာတဲ့တိုင်အောင် အနုပညာလောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ဂုဏ်သတင်းကောင်းတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပါ။ မြင့်မားတဲ့အရပ်အမောင်းနဲ့ စစနောက်နောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်ဟာ ၀တ်စားဆင်မှုအပိုင်းမှာလည်း ပရိသတ်တွေက အမြဲသဘောတကျနဲ့ အတုယူနေရသူပါ။ သက်မွန်မြင့်ဟာ အနုပညာလောကမှာသာ အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ သာယာတဲ့မိသားစုဘ၀လေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သက်မွန်မြင့်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကလည်း တစ်ကားဆိုတစ်ကားဆိုသလောက် ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပြီး သူမကိုယ်တိုင်လည်း အကယ်ဒမီဆုတွေဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ၀ါရင့်သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရုံတင်မကဘဲ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ တက်သစ်စလေးတွေကိုပါ လက်ကမ်းကြိုဆိုတတ်သူပါ။ မကြာသေးခင်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်း မြန်မာအိုင်ဒေါလ်သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေကို ၀န်းရံအားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ “၁၁ယောက်လုံးအမိုက်စား။ ဒီတခါအကုန်တော်။ ဘယ်သူ့မှလည်း ကြောက်နေကြောင်နေတဲ့သူ မရှိဘူး။ အသံရော ဆိုဟန်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့။ Big Congratulations to you all။ လူစုံဓာတ်ပုံ မရိုက်လိုက်ရဘူး။ ဘဲန်ဆိုတုန်းကတော့ ငိုချလိုက်ချင်တာ။ ကိုယ်လည်းအမေချစ်ဆိုတော့လေ”…. ဆိုပြီး ချစ်သက်ကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁ယောက်လုံးကို အပီအပြင်အားပေးနေတာပါ။
ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာတိုင် ပရိသတ်အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူ သက်မွန်မြင့်လည်း အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေ ဆက်လက်ရရှိပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Cele Connectionsပရိသတ်ကြီးကလည်း မြန်မာအိုင်ဒေါလ်ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေကို ချစ်သက်နဲ့အတူ အားပေးဝန်းရံလိုက်ပါဦးနော်။
ဘဲနျရဲ့ သီဆိုမှုကွောငျ့ ငိုခငျြစိတျတောငျပေါကျသှားခဲ့ရတယျဆိုတဲ့ သကျမှနျမွငျ့
သကျမှနျမွငျ့ကတော့ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကမှာ ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျမှုတှရေရှိနပွေီး ပရိသတျတှတေခဲနကျအားပေးခဈြခငျမှုတှေ ရရှိနတေဲ့ ဝါရငျ့မငျးသမီးတဈလကျဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ဆယျစုနှဈတဈစုကွာတဲ့တိုငျအောငျ အနုပညာလောကရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈယောကျအဖွဈ ဂုဏျသတငျးကောငျးတှနေဲ့အတူ ရပျတညျနသေူပါ။ မွငျ့မားတဲ့အရပျအမောငျးနဲ့ စစနောကျနောကျပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျတဲ့ သကျမှနျမွငျ့ဟာ ဝတျစားဆငျမှုအပိုငျးမှာလညျး ပရိသတျတှကေ အမွဲသဘောတကနြဲ့ အတုယူနရေသူပါ။ သကျမှနျမွငျ့ဟာ အနုပညာလောကမှာသာ အောငျမွငျနသေူတဈယောကျမဟုတျဘဲ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။
သကျမှနျမွငျ့ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေလညျး တဈကားဆိုတဈကားဆိုသလောကျ ပရိသတျအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပွီး သူမကိုယျတိုငျလညျး အကယျဒမီဆုတှဆှေတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျ ဖွဈရုံတငျမကဘဲ အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာတဲ့ တကျသဈစလေးတှကေိုပါ လကျကမျးကွိုဆိုတတျသူပါ။ မကွာသေးခငျက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာလညျး မွနျမာအိုငျဒေါလျသီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲရဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျလေးတှကေို ဝနျးရံအားပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ “၁၁ယောကျလုံးအမိုကျစား။ ဒီတခါအကုနျတျော။ ဘယျသူ့မှလညျး ကွောကျနကွေောငျနတေဲ့သူ မရှိဘူး။ အသံရော ဆိုဟနျရော ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့။ Big Congratulations to you all။ လူစုံဓာတျပုံ မရိုကျလိုကျရဘူး။ ဘဲနျဆိုတုနျးကတော့ ငိုခလြိုကျခငျြတာ။ ကိုယျလညျးအမခေဈြဆိုတော့လေ”…. ဆိုပွီး ခဈြသကျကတော့ ပွိုငျပှဲဝငျ ၁၁ယောကျလုံးကို အပီအပွငျအားပေးနတောပါ။
ဆယျစုနှဈတဈစုစာတိုငျ ပရိသတျအခဈြတှကေို သိမျးပိုကျထားနိုငျသူ သကျမှနျမွငျ့လညျး အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျကြျောကွားမှုတှေ ဆကျလကျရရှိပါစလေို့ ပရိသတျကွီးနဲ့ထပျတူ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ Cele Connectionsပရိသတျကွီးကလညျး မွနျမာအိုငျဒေါလျပွိုငျပှဲဝငျလေးတှကေို ခဈြသကျနဲ့အတူ အားပေးဝနျးရံလိုကျပါဦးနျော။
မေမေနဲ့ မောင်လေးကိုခေါ်ပြီး အပန်းဖြေခရီးတွေ ဆက်တိုက်ထွက်နေတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ ခရီးသွားပုံရိပ်လေး
“အမေများနေ့မှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်မိတယ်ဆိုတဲ့ မိုးယုစံ”
အကယျဒမီ စာရငျးဝငျ သူရဲ့ရုပျရှငျကားကွီးက နောကျဆုံးလကျကနျြမြှျောလငျ့ခကျြလေးပါ ဆိုတဲ့ ဒါရိုကျတာ ညိုမငျးလှငျ